» ‘पत्रकारको परीक्षा लिनेको अनुहार हेरौं न’
‘पत्रकारको परीक्षा लिनेको अनुहार हेरौं न’
१६ माघ २०७६, बिहीबार १७:५८
गुणस्तरकै कुरा गर्ने हो भने त प्रेस काउन्सिलकै सदस्यहरूले निकालेको पत्रिका पनि पढेको छु । अक्षर पढ्न नसकिने, पेज नै छुट्टाछुट्टै आएको हुन्छ । त्यस्तै पत्रिका ‘क’ वर्गमा पर्छन् । ‘क प्लस’ पनि छन्
कतिपय देशमा आफ्नै पहलमा तालिम लेउ भनेर प्राथमिकता निर्धारण गरिएका छन् । तर, परीक्षा लिएर लाइसेन्स नै लिनुपर्छ भन्ने छैन । कसै कसैले स्पेनको उदाहरण पनि दिने गर्छन् । एउटा कुरा स्पेनको, अर्को अमेकिाले लिन खोज्ने हो भने त उँट बनीहाल्छ नि । त्यसका यस्तो उँट उदाहरण नदिउँ ।
प्रेस काउन्सिलमै औंठा छापे आयो भने के गर्ने ? नआएको पनि होइन । त्यहाँ आएकाहरू आफै तालिम प्राप्त हुँदैनन् ।
पञ्चायतकालमा एक झमट लाइसेन्स तुरुन्त पाए । दर्ता भए । गोजीमा राख्या राख्यै अनी विज्ञापन आको आई हुन्थ्यो । बैशाख १, दशै, तिहार, पृथ्वी जयन्ती, फागुन ७, राजा–रानीको जन्मउत्सव आदि स्वतः विज्ञापन पाउँथे । १५–२० वटा सम्म पनि लाइसेन्स लिएर बस्थे ।
विधायन समितिले पारित गर्यो भन्दैमा सही हुने होइन । ज्ञान भएर यस्तो व्यवस्था गर्न लागे भन्ने छैन । समितिका सदस्यहरू आए भने म पनि दश वटा प्रश्न सोध्न सक्छु । एउटा मात्रै प्रश्न मिलाउन् त ? सक्छन् ?
सामाजिक सञ्जाल र अलनाइन मिडियाले सरकारको गुणगान गाएन । उल्टो गालीगलौज आयो भनेर उनीहरूलाई चोट पुगेको छ । यो तथ्य हो । चोट पुगेपछि जथाभावी लेख्ने ? भन्ने कुरा आयो । उनीहरूलाई के ज्ञान भएन भने अनलाइनमा आएका प्रतिक्रिया त छापा मिडियामा सम्पादकलाई चिठी आए जस्तै हो । पहिला त समाचारै हेर्नु पर्यो । पत्रकारले त समाचार लेख्छ । दोस्रो कुरा कस्तो प्रतिक्रिया/पाठकपत्र आउँछ भन्ने कुरा पत्रकारले जिम्मा लिने हो र ?
पहिलो कुरा नियत मै शंका भयो । नियतमा शंका भए पनि गर्न लागेको कुरा राम्रो हो कि होइन ? भन्दा राम्रो होइन । यसले स्तर पनि बढ्दैन । संविधान अनुसार ल्याउन पनि मिल्दैन
फरक यत्ति हो पत्रकार, संस्थागत भएको हुन्छ । त्यो संस्था कसले बनायो ? निजी क्षेत्रले । सञ्चार गृह खोल्न सरकारले त एक पैसा दिएको हुँदैन । सञ्चार गृह त लगानी कर्ता आफैले स्थापना गरेको हो ।
सञ्चार माध्यमले दिने समाचार सही, सत्य हुनुपर्यो । सही आएको छैन भने सच्याउनु पर्यो । जस्तो न्यूयोर्क टाइम्सले प्रत्येक दोस्रो वा तेस्रो दिन ‘सच्याइएको वा भूल सुधार’ निकालेको हुन्छ ।
हामी बाउबाजेको सम्पत्ति धितो राखेर पनि युरोप पढ्न जान्छौं । त्यहाँको पत्रकारिताप्रति जनविश्वास कस्तो छ भन्ने एउटा सर्वेक्षणले देखाउँछ । युरोपका ३७ देशका गरिएको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार त्यहाँका सञ्चार माध्यमलाई ३५ प्रतिशत जनताले मात्रै विश्वास गर्दा रहेछन् । तालिम प्राप्त, दक्ष, साधन स्रोत सम्पन्न पत्रकारिताको अवस्था हो यो ।
अमेरिकामा त झन पछिल्लो तीन/चार वर्ष यता ३०–३२ प्रतिशत मात्रै जनविश्वास छ । यो सिएनएन, न्यूयोर्क टाइम्स, वासिंगटनपोस्ट, एबिसी न्यूजहरूप्रतिको पाठकको धारणा हो ।
स्नातक नगरेका मान्छे पनि शिक्षा मन्त्री बनेका कैयौं उदाहरण छन् । ती स्नातक अनुत्तीर्ण शिक्षा मन्त्री विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन्छन् ।
पाठक, समाज, देशलाई पत्रकारिताबाट हानी पुर्याएको रहेछ भने अन्य कानून अनुसार कारवाही गर्न सकिन्छ । नियम बनाउन सकिन्छ ।
पहिलो कुरा नियत मै शंका भयो । नियतमा शंका भए पनि गर्न लागेको कुरा राम्रो हो कि होइन ? भन्दा राम्रो होइन । यसले स्तर पनि बढ्दैन । संविधान अनुसार ल्याउन पनि मिल्दैन । स्रोत: अनलाईनखबर